ဂိမ်းထဲမှာဇာတိမြို့လေးကိုပြန်အသက်သွင်းခဲ့တဲ့ကောင်လေး !!!! - JAPO Japanese News
လာ 11 May 2020, 11:35 မနက်
Miyagi စီရင်စု 気仙沼市（けせんぬまし）Kesennuma မြို့လေးဟာ လူဦးရေကျဆင်းမှုပြဿနာနဲ့ကြုံတွေ့နေရပါတယ်။
ပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက် သိပ်ပြီးအကျယ်လှတဲ့မြို့လေးဖြစ်တဲ့အတွက် မကြာသေးမီနှစ်များက နေထိုင်သူလူဦးရေလျော့နည်းလာခဲ့ပါတယ်။
အဲ့ဒီနေရာက ၂၀၁၁ ခုနှစ်မှာ ဆူနာမီကြောင့် မြို့မှာရှိသမျှအားလုံးဆွဲချခြင်းခံခဲ့ရတာပါ။
အဲ့ဒီမြို့လေးမှာနေထိုင်တဲ့ အထက်တန်းတတိယနှစ်ကျောင်းသားဖြစ်တဲ့ 畠山（はたけやま）Hatake Yama　ဆိုသူနဲ့　吉城（よししろ）Yoshi Shiro တို့ဟာ ဂိမ်းတစ်ခုတီထွင်ခဲ့တာကြောင့်၊ သူတို့ရဲ့သတင်းဟာလူပြောများတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုလိုဖြစ်လာပါတော့တယ်။
အထက်တန်းကျောင်းသားဟာ ဒေသဆိုင်ရာပြဿနာဖြေရှင်းမှုယှဉ်ပြိုင်တဲ့ တစ်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာပြိုင်ပွဲမှာ အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တဲ့ ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အားကစား၊ သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ဝန်ကြီးဆုကိုလက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။
သူတို့ဟာအဲ့ဒီဂိမ်းကို ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အတွေ့အကြုံကိုအခြေခံပြီး ပြုလုပ်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တီထွင်ထားတာက smart phone နဲ့ဆော့ရတဲ့ 気仙沼クエスト Kesennuma Quest လို့ခေါ်တဲ့ ဂိမ်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြို့ကိုလာလည်တဲ့ ခရီးသွား　characters များအဖြစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကစားသမားတွေက မြို့ထဲကိုလမ်းပတ်လျှောက်ပြီး ဈေးဝယ်လိုက်၊ မြို့မှာနေထိုင်သူတွေနဲ့ စကားပြောလိုက်လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။
တကယ်ရှိတဲ့ ဆိုင်နဲ့နေထိုင်သူတွေကိုလည်း ဒီဂိမ်းထဲမှာအများကြီးထည့်ထားတယ်။
ဂိမ်းဖန်တီးသူ 畠山（はたけやま）Hatake Yama　က သူမူလတန်းဒုတိယနှစ်ကျောင်းသားအရွယ်မှာ သူ့အိမ်လည်းပျက်စီးသွားပြီး၊ သူ့မှာရှိတဲ့ဂိမ်းတွေအကုန်လုံးကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။
အဲ့ဒီမကျေနပ်မှုတွေက အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝရောက်လာတဲ့အခါ ကိုယ်တိုင်ဂိမ်းတီထွင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်စေပါ‌တော့တယ်။
အထက်တန်းကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်လာတဲ့အခါ၊ သူ့ရဲ့ဇာတိမြို့လေးဖြစ်တဲ့ 気仙沼 Kesennuma ဟာခြောက်ကပ်ပြီးအထီးကျန်ဖို့ကောင်းတာကို သတိပြုမိလာတယ်။
ယာယီပျော်ပွဲရွှင်ပွဲလုပ်တာမဟုတ်ဘဲ၊ အချိန်အကြာကြီး 気仙沼 Kesennuma မြို့လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေများလာဖို့ ဘာလုပ်ရင်ကောင်းမလဲ?
“ မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့မျက်နှာကို မြင်ရတဲ့ဂိမ်းပုံစံလုပ်ပြီး၊ 気仙沼 Kesennuma ကနေ မြို့ကြီးပြကြီးတွေကိုထွက်ခွာသွားတဲ့လူတွေ ပြန်လာချင်အောင်လုပ်ရအောင်”
အဲ့ဒီလိုတွေးတဲ့ 畠山 Hatake Yama ဟာ ၂၀၁၈ ခုနှစ်မှာဂိမ်းကိုစတီထွင်ခဲ့ပါတယ်။
တစ်ယောက်တည်းဆိုရင်တော့ ကိုယ် idea ရသလောက်ပဲလုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့တွေးပြီး၊ သူ့လိုပဲဂိမ်းအကြိုက်တူတဲ့ နှစ်တူကျောင်းသား 吉城（よししろ）Yoshi Shiro ကို Test player အဖြစ်ခေါ်ပြီး၊ သူလုပ်ထားတဲ့ဂိမ်းကို ကစားခိုင်းတယ်၊ ပြီးတော့ နောက်ထပ်idea တွေကိုလည်းတောင်းပြီး၊ ပိုပြီးကောင်းသထက်ကောင်းအောင်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
気仙沼クエスト Kesennuma Quest ဆိုတဲ့ဂိမ်းဟာ အားလုံးရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုရယူပြီး ပိုပြီးကောင်းလာစေဖို့ရန်အတွက်၊ အကြံဉာဏ်တွေကိုလည်း တောင်းခံပါတယ်။
နည်းပညာသင်ကျောင်းသားအနေနဲ့ 気仙沼 Kesennuma ကိုသွားဖူးတဲ့သူရှိမလား?
မရှိဘူးဆိုရင်တော့ သေချာပေါက်ဒီဂိမ်းလေးကိုဆော့ပြီး 気仙沼 Kesennuma ကိုမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဇာတိရပ်ရွာကိုချစ်တဲ့ကောင်းလေးဟာ၊ သူအရမ်းကြိုက်တဲ့ဂိမ်းနဲ့အတူ မြို့ကိုပြန်ပြီးစည်ကားအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟင်? အဲ့ဒီလိုဂိမ်းကိုတီထွင်ခဲ့တယ်?? Erotic ဂိမ်းကနေစခဲ့တဲ့ ဂျပန်ရဲ့အရမ်းနာမည်ကြီးတဲ့ ဂိမ်းတီထွင်သူတွေ
ဖူဂျီတောင်ရဲ့အရိပ် တစ်ခွင်လုံးလွှမ်းမိုးနေတဲ့မြို့ကလေး (အထွတ်အမြတ်ထားရာ Mt. Fuji )
အစဉ်အလာမပျက်ကျင်းပနေကျ ရိုးရာပွဲတော် မှ အွန်လိုင်းဂိမ်းအဖြစ်သို့ !!!!!
လူသိပ်မသိတဲ့ ပညာတော်သင်စနစ်။ ဝေးလံခေါင်သီတဲ့ ကျွန်းမှာပညာတော်သင်ရတယ်ဆိုတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုလေး
နည်းပညာသင်အလုပ်သမားများနဲ့အတူ ယာစိုက်ကြမယ်။ ကိုရိုနာကပ်ရောဂါအတွင်း နိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ ဒေသခံတွေကြားက ဆက်ဆံရေး
အာဏာပါးကွက်သား 山田浅右衛門 Yamada Asadaemon!!!!
Nausicaä ရဲ့ Möwe ကိုအမှန်တကယ်တီထွင်လိုက်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး
ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နံပါတ်တစ် ဆာမူရိုင်းတွေ၊ ရှောဂွန်းတွေရဲ့ တစ်နေ့တာနေထိုင်မှု၊ ထင်ထားတာထက်ကို ပိုမိုတည်တည်တံ့တံ့နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့ ရှောဂွန်းများ
စစ်သင်္ဘောဒီဇိုင်းများရဲ့ နတ်ဘုရားဖြစ်သူနဲ့ သူ့ရဲ့အရှုံး။ ဂျပန်ရှုံးရတဲ့ အဓိက အကြောင်းရင်း။
တကယ်ရှိခဲ့တဲ့ ပင်လယ်ဓားပြဘုရင် Murakami Suigun
အသက် ၅ နှစ်မှာကတည်းက ခွေးကို သတ်ရပြီး၊ ၁၅ နှစ်မှာ လူကို သတ်ရတဲ့ ဆာမူရိုင်းများ